| ‘सेक्सको मामलामा समाज उदार बन्दैछ’
मेचीकाली : 2015-01-02 17:11:02
रञ्जित बोहरा, कण्डम व्यवसायी
काभ्रेका युवा व्यवसायी हुन् । केही बर्ष काठमाडौंमा कण्डम तथा सेक्स टोयको व्यपार गरेपछि आफ्नै जिल्ला फर्केर बनेपामा कान्तिपुर कण्डम हाउस एण्ड सेक्स टोय शप सञ्चालन गरिरहेका बोहरा पछिल्लो समय बढ्दो यौन विकृति रोक्न आफूले यस्तो व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । यौन मानिसका लागि नभई नहुने भए पनि असुरक्षित यौनसम्पर्कले समस्या बढिरहेको बताउने बोहरा आफ्नो व्यवसायले त्यसलाई रोक्न केही हदसम्म भए पनि सघाउ पुर्याएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ बोहरासँग गरिएको कुराकानीको अंश :
कस्तो खालको व्यवसाय हो यो ?
यो यौनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी तथा परामर्शका साथै यौन सामग्रीहरु जस्तै ः कण्डम, कृतिम यौनाङ्ग आदिको व्यवसाय हो ।
कस्ता कस्ता कण्डमहरु पाइन्छन् ? तपाईका ग्राहक कस्ता हुन् ?
हामीकहाँ सामान्यतया हेल्थपोष्ट र अन्य मेडिकलमा पाइने कण्डमहरुका साथै विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका कण्डमहरुसमेत पाईन्छ । त्यसमा विशेष किसिमको महिलाहरुलाई आनन्दित पार्ने काँडा भएको कण्डम, शिघ्र स्खलनको समस्यालाई कम गर्ने कण्डम, महिलाहरुले प्रयोग गर्ने कण्डम, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, सुगन्धित र अतिपातलो किसिमको पनि उपलब्ध छ ।
ग्राहकको हकमा ठ्याक्कै यस्ता किसिमका भन्दा पनि प्रायः सबै उमेर समूहका आउने गर्दछन् । यसमा महिलाहरुले पनि चासो र सामाग्री किन्ने क्रम बढ्दो छ । विशेष गरी महिलाहरुमा विवाहित अलि बढी नै छन् ।
कण्डमको मात्र व्यवसाय सम्भव छ ? समाजमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ कण्डम हाउसको नामले ?
प्रायः मान्छेहरुलाई सुन्दा अलि अचम्म लाग्न सक्छ कि कण्डमको मात्रै पसल तर यो हामीले गरिरहेका छौं । सुरुसुरुमा कण्डम हाउस भन्ने वित्तिकै आम मानिसहरुले अलि असजिलो मान्ने खालको व्यवहार देखिन्थ्यो भने करिब डेढ वर्षको अन्तरालमा त्यस किसिमको व्यवहारमा निकै परिवर्तन आएको छ । आज पसलमा ग्राहकहरुबाट कमसेकम के हो भनेर बुझ्ने र सकारात्मक सुझावहरु पाउन थालेको छु ।
समाज सेक्सप्रति कत्तिको सचेत पाउनुभयो ? गर्भनिरोधक आकस्मिक चक्की र कण्डम कुन राम्रो हो ग्राहकलाई ?
समाजमा अझै पनि सेक्सको विषयमा मानिसहरु चर्चा गर्न चाहँदैनन् । अझै पनि सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने चेतनाको कमी छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विशेष गरेर टिनएजर्स जो निकै नै बढी जिज्ञासु र चञ्चल स्वभावका हुन्छन् । यौनप्रति उनीहरुलाई सबैले सचेत गराउन जरुरी छ ।
गर्भनिरोधकको विषयमा भन्नुपर्दा कण्डमको प्रयोग गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ । यसबाट गर्भ रहनबाट जोगाउनुका साथै एचआईभी एड्स तथा अन्य यौन रोगहरुबाट पनि बचाउछ ।
यस्ता व्यवसायले समाजमा विकृति फैलाउँछ पनि भनिन्छ नी ? रोक्न चाहिँ के मद्दत गर्छ ?
यस किसिमको व्यवसायले समाजमा नकरात्मक असर पार्छ भन्नु एकदमै गलत धारणा हो । सेक्सको विष्यमा जत्ति बढी चर्चा गरिन्छ त्यति नै यस सम्बन्धि भ्रमहरु निश्चित रुपमा कम हुँदै जान्छ । जब मानिसमा यस सम्बन्धी सकारात्मक सोचको विकास हुँदैन उसमा यौन कुण्ठाले घर बनाउँछ फलस्वरुप उसको कुण्ठित मानसिकताका कारण अप्रिय घटनाहरु घट्ने गर्छन् । यसलाई निर्मूल गर्न नसकेपनि कम गर्ने हाम्रो अभिप्राय हो । हाम्रो संकल्प हो । र यो विस्तारै सफल पनि हुँदैछ । यस किसिमको कार्यलाई विकृति हो भनेर हतोत्साहि पार्नु भनेको समाजलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो ।
सेक्सको मामलामा समाज उदार विकृत बनेको हो ? सेक्समा कण्डमको प्रयोग कति प्रतिशतले गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
अवश्य पनि हो । पहिलेको भन्दा हाम्रो समाजमा शिक्षित जमात बढ्दै गएकोले विस्तारै यौनको विषयमा चर्चा परिचर्चा बढ्दै गएका छन् । कण्डमको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । विशेष गरेर युवायुवतीहरु, नवविवाहितहरुले बढी मनपराएको पाइन्छ । अविवाहितहरुको लागि गर्भनिरोध तथा अन्य यौनरोगहरुको संक्रमणबाट जोगिने साधन हो । यसर्थ सबैको रोजाईमा कण्डम नै पर्ने गरेको छ ।
के हो सेक्स टोय ? यसको बजार कस्तो छ ?
यो महिला र पुरुषहरुले यौनान्द प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने कृतिम साधन हो । जसको बनावट महिला तथा पुरुषको प्राकृतिक बनावट जस्तै हुन्छ । यो एकदमै उच्च स्तरको सिलिकनबाट निर्मित हुन्छ । सिलिकनबाट बनेको हुनाले यसलाई छुँदा वा प्रयोग गर्दा प्राकृतिक झै अनुभव हुन्छ र सजिलै यौनान्द दिन्छ । यसमा प्रयोग गरिने भाइब्रेटरले अझ बढी उत्तेजना बढाई चरमसुखानुभूति गर्न सहयोग पु¥याउँदछ ।
यो व्यवसायमा कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
फाइदा र बेफाइदाको कुरा भन्दा पनि ग्राहकहरुलाई सेवा पु¥याउनु ठूलो कुरा हो । मेरो विचारमा काभ्रेको व्यापारिक नगर बनेपामा पहिलोपटक व्यवसाय सुरु गरेको हो । आम्दानी पनि राम्रै भइरहेको छ । सुरुसुरुमा अलि समस्या भएतापनि आजभोलि यसले राम्रै बजार लिइरहेको छ ।
सेक्स के हो ? यसको कत्तिको आवश्यकता छ ?
सेक्स शारीरिक तथा प्राकृतिक आवश्यकता हो । यसलाई सबैले सहज रुपमा लिनुपर्छ । हरेक सजिव प्राणीको आवश्यकता हो सेक्स । सेक्स मनोरञ्जन प्राप्ति तथा सन्तान प्राप्तिको लागि अति आवश्यक छ ।
अन्तमा युवालाई के सन्देश दिनचाहनुहुन्छ ?
युवा भनेको अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था हो । यो उमेरका व्यक्तिहरुलाई विशेष गरेर यौनका विषयमा धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरु दिन सके समाजमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । र अर्काे कुरा आजको समयमा विदेशिने युवाहरुको जमात पनि धेरै छ । यसलाई रोक्न सरकारले केही पहल गर्नुपर्छ ।